Ma kugu bixi laheyd in aad seexato guri ay ku hareereysan yihiin 77 libaax?! | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ma kugu bixi laheyd in aad seexato guri ay ku hareereysan yihiin 77 libaax?!
Ma kugu bixi laheyd in aad seexato guri ay ku hareereysan yihiin 77 libaax?!
Posted by: Ahmed Haadi January 4, 2019
Himilo FM – Guriga libaaxa, waxa uu ku yaalaa bartamaha keyn dabiici ah oo dhacda dalka Koofur Afrika, waxaa kireysta dalxiisayaasha, waxaa ku hareereysan 77 libaax oo waa-weyn. Bal ka waran haddii gurigan lagu yiraahdo seexo? Markaad joogto aqalkan waxaa wehel kuu ah reenka libaaxyada, waxa keliya ee idin dhaxeeya waa siligga yar ee ku wareegsan guriga.
“ Martidu waxay ku dhex noolaan kartaa libaaxyada, iyagoo u kuur galaya noocyadooda,” agaasimaha GG Conservation ayaa sidaa u sheegay mareegta Mail Online. “ waxay daawan karaan hab dhaqanka dabiiciga ah ee libaaxa sida isla weynidooda oo ah arrin xiiso leh. Waxaan nahay hay’ad aan faa’iido doon aheyn waxaa u taaganahay inay amaan gelino libaaxyada,”.
“ Marnaba libaaxa kama fogaaneysid wax ka badan shan mitir markaad gurigan degan tahay, balse kireystaha waxa uu badbaadadiisa uga mahad celinayaa deyrka ku wareegsan oo ah mid elektaroonik ah, sidaa darteed waxaad daaradda guriga ku qabsan kartaa Sab, iyagoo libaaxyadu ay ku daawanayaan,” Suzanne Scott ayaa sidaas ku daray hadalkiisa.
Previous: La kulan: Taageere si uu jirkiisa ugu sawiro kooxda uu xiiseeyo ay ku qaadatay 60 saac
Next: Waa immisa mushaarka uu qaato madaxweynaha Maksiko?